Nitondra ny anjara birikiny ny FIMPIFIMA - Madagascar Informations
12 avril 2017 13 avril 2017 Madagascar Informations Aucun commentaire
Nitondra ny anjara birikiny teto amin’ny firenena ny fikambanany mpitory filazantsara eto Madagasikara na ny FIMPIFIMA androany.
Fianakaviana miisa 48 may trano eto aminy fokontany Ampefiloha Ambodirano no nahazo fanampiana toy ny vary milanja 5 kilao ,menaka 1 litatra ,ary koveta 1 isan’izany ihany koa ny nanomezana fanampiana mitovy ho an’ny fokontany Anosizato Andrefana izay nitondra takaitra taminy rivodoza Enawo ka tokatrano miisa 87 ihany koa no nahazo fanampiana.
Marihina fa ny Pastora Randrianaivo Ravelona Adolphe no filohany fimpifima no sady filohany fiangonana RHEFI eto Madagasikara. Tokony hiray hina sy hiray saina hoy izy ny malagasy satria raha tanteraka izany dia handroso Madagasikara.
← Documentaire AKIMA (Association des kinésithérapeutes de Madagascar)
Très bonne récolte de riz hybride de la Vitrine d’Iavoloha →
Hampiakatra ny saran-dalana ho 500 Ar ny UCTU
Nilanonana ny foiben’ny sampana Mpamonjy Voina Tsaralalana
29 juin 2017 Gasikara 0
APPUI À LA PÊCHE ARTISANALE À ANKAZOMBORONA ET BLOC CHIRURGICAL AU CHRD
10 octobre 2016 Madagascar Informations 0